Jowhar.com - Somali news Leader - News: Libaax cunay nin shaqaale ka ahaa Xero Xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taal Addis Ababa
December 07 2013 20:33:25
Libaax cunay nin shaqaale ka ahaa Xero Xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taal Addis Ababa
Libaax ayaa maanta ku dilay nin shaqaale ka ahaa xero xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kadib markii ninkan uu ilaabay inuu xiro albaabka qol uu ku jiray libaaxa oo uu u nadiifinayay halka uu ku hoyan lahaa Libaaxu.
Libaax ayaa maanta ku dilay nin shaqaale ka ahaa xero xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada Addis Ababa, kadib markii ninkan uu ilaabay inuu xiro albaabka qol uu ku jiray libaaxa oo uu u nadiifinayay halka uu ku hoyan lahaa Libaaxu.
Ninkan oo lagu magacaabo Abera Silsay oo 51 jir ah ayaa nadiifinayay qafaskii uu ku jiray libaaxa, iyadoo weerarkan uu ku dhacay 15-20 daqiiqo.
Libaaxan oo lagu magacaabo Kenenisa Bekele oo loogu magac daray Orodyahanka reer Itoobiya ayaa ka mid ah dhowr libaax oo ku jira xerada xayawaanka ugu weyn ee Addis Ababa ku taal.
Xerada Xayawaankan lagu xanaaneeyo ayaa la filay sanadkii 1948-dii, xilligii uu furay Boqorkii hore ee Itoobiya Haile Selassie.
Agaasimaha xerada xawaanka lagu xanaaneynayo Musie Kiflom ayaa u sheegay wakaalada Wararka ee AFP in ninkan uu soo galay qeybta 10aad ee halka Libaaxu ku jiray, isagoo ilaabay inuu xiro albaabka qafaskii uu Libaaxa ku jiray, isagoo doonayay inuu hagaajiyo qeybta uu seexan lahaa.
Libaaxa ayaa ugu dambeyn cunay, waxaana ciidamada ammaanka ay xabado kor ugu rideen, hase ahaatee uma joojin.
Xeradan ayaa waxaa ku jira ilaa 15-Libaaxa loo yaqaano Abyssinian Lions ee gabaabsiga ah nuuca loo yaqaano shaashka qoorta ee madow oo ku nool dalka Itoobiya.
Dhacdadan ayaa ah tii labaad oo ka dhacda Xeradan xaywaanka muddo 17-sano ah, iyadoo sidan oo kale ah nin ka shaqeynayay xeradan uu Libaax dilay.
Xeradan Xayawaanka lagu xanaaneeyo ayaa maalintii waxaa soo booqda ilaa 2-kun oo ruux, oo u soo daawasho taga xaywaanada noocyadooda kala duwan ee ku jira xerada.
master on September 16 2013
0 Comments · 3706 Reads
jowhar.com3,112,298 unique visits